China S308 Yepamusoro yekumhanya rotary vial labeling muchina Kugadzira uye Fekitori |S-conning
Inoshanda kune akasiyana marudzi eVial labeling
S308 High speed rotary vial labeling muchina
Applications:Inoshanda kune akasiyana marudzi eSchering (akasiyana marudzi emaampoules. oral liquid mabhodhoro, mabhodhoro nezvimwewo), ane dhayamita 10mm-30mm (kana saizi yakasarudzika), inoshandiswa zvakanyanya muindasitiri yemishonga.
Iyo inoshandiswa zvakasiyana-siyana S308 High Speed ​​​​vial labeler mushonga wekugadzira jekiseni mutsara wakashongedzerwa nehutsva uye nekukurumidza netcon control tekinoroji (inosarudza).Nekungodzvanya kweimwe-yekubata skrini, unogona kugadzirisa nyore marongero akasiyana echigadzirwa chako chinodiwa.
-Kutora yakakwirira-kumhanya (Japan/France/USA))servo labeling system;
-Inoshanda kune akasiyana marudzi e schering (akasiyana marudzi eampoules. Oral liquid mabhodhoro, mabhodhoro nezvimwe), ane dhayamita 10mm-30mm (kana customized saizi);
- Yakakwirira-chaiyo yekunyora sisitimu, ine kushivirira kwemavara 1mm; -Stable kumhanya:> 400 ~ 800 mabhodhoro/miniti;
-Kukuvadza mwero yakaderera pane 1/300,000;
- Yakawanda-yakangwara yekuongorora sisitimu, ine musanganiswa wakakwana wepamusoro-kumhanya, kunyatsojeka, kugadzikana uye kuvimbika.
-Muchina wakakwana unotora SUS304 simbi isina tsvina uye A6061
-High-simba aluminium alloy, ine chitarisiko chakanaka uye kutevedzera zvinodiwa zvekufungidzira zvecGMP, FDA, OSHA, CSA, SGS uye CE.
-Rotary & Roller turntable ine matatu positioning kuti ive nechokwadi chechokwadi uye chakagadzikana chepamusoro-chinomhanya chekunyora basa;
- Nyeredzi ine mavhiri ekuramba mudziyo unogona kunyatsoona uye kubvisa zvikanganiso zvakarongeka zvinhu; kana yakanyanya-kumhanya ichishanda.
- Vhidhiyo yekuona mudziyo kuti upe akasiyana ekuona mabasa: Kuonekwa kwemazita, kuona kuvuza, uye kudhinda kodhi yekuona, zvinhu zvisingaite zvinobviswa uye kudzokororwa.
-Inogona kusarudza yakakwira-inomhanya inopisa chitambi muchina, yekupisa yekufambisa printer kana inkjet muchina wekudhinda kuti uzive coding synchronously;
-Inotsigira midziyo inomhanya mamiriro uye ruzivo rwearamu inogona kuve chaiyo-nguva inoratidzira muhurongwa.
Muchina wedu une servo madhiraivha anoburitsa kwakaringana uye nekumhanya kwakanyanya kudzokororwa kunyora.Iyo inosvikika nyore vhiri reruoko inogadzirisa uye padivi njanji inokurumidza kugadzirisa inobvumira yakawanda "up-nguva" pamutsetse wako wekugadzira!Iyo S308 inoshandiswa mune angangoita ese maindasitiri akadai semishonga, zvigadzirwa zvekuchengeta munhu, chikafu, mavhitaminzi, zvekuzora, uye makemikari, uko kuvimbika-mu-kirasi ibasa rekugadzira nemazvo.
Sophisticated variable frequency drive controller inovimbisa kugadzikana kwekumhanya uye ± 0.5mm kusarongeka mwero.
Nhungamiro njanji chikamu cheiyi jekiseni rekugadzira mutsara unogadzirwa nemhando yepamusoro aluminiyamu yakavharwa nepurasitiki-yakapfekwa epurasitiki yekumaindasitiri kuti ive nechokwadi chekunyora nemazita uye kuchengetedzwa kwechigadzirwa, kuchengetedza chigadzirwa chemutengi chichiyevedza uye chiri muchimiro chakakwana.
Zvakapfuura: S921 High speed soft tube labeler
Zvinotevera: S307 High speed vial labeling muchina
High-speed otomatiki katoni kugadzira uye kupinza pr...
Kuendeswa Kutsva kweChina Massive Production Vacci...
Plastiki Chisimbiso Machine, Printer For Cosmetics Jars Bottles, Label Applicator Machine Yemabhokisi, Sticker Labeling Machine Manufacture, Commercial Bottle Labeling Machine, Syringe Assembly uye Labeling System,